Sidii Uu Maraykanku Ku Ogaaday Safarka Qasem Soleimani Ka Hor Intaanu Dilin Iyo Cida Basaastay Ee Xogta Safarkiisa Gudbisay | Marsa News
Sidii Uu Maraykanku Ku Ogaaday Safarka Qasem Soleimani Ka Hor Intaanu Dilin Iyo Cida Basaastay Ee Xogta Safarkiisa Gudbisay
Hargeisa:(Marsanews) Basaasiin la shaqeeya Mareykanka oo ku kala sugan garoomada diyaaradaha ee Damascus iyo Baghdad ayaa ka caawiyey Mareykanka inuu helo xogta safarkii Jeneral Qasem Soleimani, ee weerarka diyaarada Drone ka ah lagu dilay, waxaa sidaas werisay wakaaladda wararka Reuters.
Soleimani iyo afar ilaalo ah oo ka tirsan Ciidamada Kacaanka Islaamiga ah, ayaa diyaaradda Cham Wings ka soo raacay magaalada Damascus, kadibna ka soo degay Baghdad.
Soleimani ayaa ku safrayey diyaarad rakaab ah, isaga oo ka fogaaday inuu adeegsado diyaarad gaar ah, si aan loo beegsan.
Sidoo kale Soleimani iyo ilaaladiisaba marnaba laguma darin xogta rakaabka diyaaradda la socday, si aan warkooda loo helin.
Soleimani ayaa markii uu yimid Baghdad, islamarkaana ay soo galbiyeen kolonyo ka kooban laba baabuur, ayaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo rideen Mareykanku.
Baarayaasha Iraq ee kiiskan ayaa rumeysan in dad ka shaqeeya garoomada diyaaradaha ee Baghdad iyo Damascus oo si hoose basaasiin ugu ah Mareykanka ay gudbiyeen xogtaasi.
Baadhitaanka kiiskan ayaa la sheegay inuu hoggaaminayo Falih Al-Fayadh oo ah la-taliyaha amniga qaranka Iraq.
Dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira laba saraakiil amniga ah, oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Baghdad, iyo laba ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee Cham Wings, iyo waliba basaas ka shaqeeya garoonka Damuscus, iyo qof kale.
Hay’adda sirdoonka Iraq ayaa rumeysan in lixdan qof, oo aan weli la xidhin ay qeyb ka yihiin shabakad basaasiin ah, oo si hoose ula shaqeeya Militariga Mareykanka, islamarkaana u gudbiya xogaha muhiimka ah.
Labada shaqaale ee shirkadda Cham Wings waxaa sidoo kale baadhitaan ku haya sirdoonka Syria, sida ay laba sarkaal oo amniga ahi u sheegeen Reuters.
Natiijada hordhaca ah ee baadhitaanka ayaa muujineysa in xogtii ugu horreysay ee Soleimani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha Damascus, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada amnigu.
Shaqada unuga sirdoonka ee garoonka Baghdahd ayaa iyaguna ahaa kuwa xaqiijiyay imaanshihiisa iyo nooca kolonyada baabuurta ee uu ku safrayey.
Markii intaas oo xog ah loo gudbiyey Mareykanka, durba waxaa soo kacday diyaarad drone ah, oo dhowr gantaal ku dhufatay kolonyada uu la socday Soleimani, kolonyadaas gantaalka lala eegtay oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi Muhandis, oo ahaa hoggaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shaxd Al-Shacab ee dalka Iraq.
Guud ahaan waxaa goobta ku dhintay labadooda iyo 8 qof oo kale oo ilaalo ahaa.